किविको स्वादमा प्रीन्सेस वाईन बजारमा - Janmabhumi Post
प्रीतम कुमार तामाङ २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १३:१४
फलहरुको राजा किवि फलको स्वादमा नेपालकै पहिलो प्रीन्सेस वाईन बजारमा आएको छ । प्रीन्सेसलाई माउन्ट एभरेष्ट वाईनरी प्रा. लि. ले उत्पादन गरेको हो । रेड र व्हाईट गरि दुई ब्राण्डमा उपलब्ध यस वाईनको उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री धनकुटा राजारानीमा रहेको छ । कंपनीका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु बास्तोलाका अनुसार पछिल्लो चरण नेपालमै बढ्दै गएको किवि फल खेतीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरास्ट्रिय स्तरको स्वादमा यो वाईनलाई उपभोक्त माझ ल्याएको बताउनुहुन्छ ।
नेपालका १६ वटा वाईन कम्पनीहरु मध्ये १५ वटाले अंगुरको र अन्य फलफुलको उत्पादन हुनेमा प्रीन्सेस पहिलो किविको स्वादको वाईन रहेको दाबी कम्पनिले गरेको छ । जसले गर्दा बजारमा यसको राम्रो माग हुने र वाईन पारखीहरुको रोजाईमा पर्ने बताए ।
डिजिटल मार्केटिङको भरपुर उपयोग गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । हाललाई ७ सय ७० बजार भाउ तोकिएको छ । माउन्ट एभरेष्ट वाईनरी प्रा.लि. का अध्यक्षका अनुसार फ्याक्ट्रीमा लगानी हालसम्ममा करिब १८ देखि २० करोड लागेको बताउनुभयो । नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो नै रहेको बताउँदै वाईन कम्पनीले कृषकको बारीमा उत्पादित कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सरकाले बिल अनिवार्य गरिएकोले केही झन्झट रहेकोले यसलाई सहज बनाईदिए अझ उपयुक्त हुने धारणा छ ।
मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले व्यवसायी साथीहरुले संधै किवि फलको वाईन माग गरिरहेको अवगत गराउँदै प्रीन्सेस बजारमा आएपछि त्यो पूरा भएको बताउनुभयो । यसै अवसरमा कंपनीको तर्फबाट मदिरा व्यवसायी महासंघको भवन निर्माणका लागि अध्यक्ष सोनाम शेर्पालाई रु. १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यो वर्ष दशैँको लागी नयाँ नोट वितरण नहुने
किबिको फलबाट बनेको प्रीन्सेस वाईन बजारमा ल्याईदै